DEG DEG:Saraakiisha Ciidamada Puntland & Somaliland oo jiidaha hore ee dagaalka Tukaraq ku shirsan | Puntland
DEG DEG:Saraakiisha Ciidamada Puntland & Somaliland oo jiidaha hore ee dagaalka Tukaraq ku shirsan
Wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayo jiidaha hore ee dagaalka Tukaraq ee gobolka Sool oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa sheegaya in furimaha dagaalka ay xiligani ka socdaan kulamo iyo shirar gaar gaar ah oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland.
Kulamadani oo iyagu cid walba si gaar gaar ah u qabsanayso ayaa waxaa la sheegay in ay salka ku hayaan qaabkii la iskugu diyaarin lahaa dagaalo culus, taas oo ka dhigan in dhinacyada Puntland iyo Somaliland uu mid walbaaba dhankiisa kawado xiisad dagaal.
Saraakiisha ciidamada Puntland ayaa qorshaynaya weeraro iyo dagaalo cusub oo ay ku bartilmaameedsan doonaan ciidamada Somaliland halka saraakiisha ciidamada Somaliland ay iyaguna kawada tashanayaan sidii ay iskaga difaaci lahaayeen isla markaasna meesha looga saari lahaa khilaafyo xoogan oo u dhaxeeya gudahooda.
Madaafiicda goobta dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa dhinac walba uu diyaarsaday, waxaana heegan ku jira ciidamada Puntland oo laga yaabo in ay qaadaan dagaal culus.
Xaalada deegaanka Tukaraq ayaa caawa kacsan waxaana xili walba dhici kara dagaal culus maadaama ciidamada Puntland ay xiligani haystaan fursad ay ku wajihi karaan ciidamada Somaliland ugana qabsan karaan magaalada Laascaanood.